Archive du 20190708
Barean’i Madagasikara Roso ny dia handrombaka ny amboara
Miroso ny dia ho an’ny Barean’i Madagasikara amin’ny fametrahana tantara any amin’ny fifaninanana CAN 2019.
Adihevitra eo amin`ireo antoko politika Iza no ho lehiben`ny mpanohitra ?
Niteraka resabe tato ho ato ny amin`izay ho lehiben`ny mpanohitra taorian`ny fanambarana nataon`ny antoko Tiako I Madagasikara (TIM) ny herinandro lasa teo fa hijoro ho mpanohitra ny TIM.
IEM an-dRajoelina « Tokony ho efa PEM ! »
Izaho Pastora Tovombe Tsangandray Leon de l’Or lany depiote tao Midongy atsimo dia nahatsapa tokoa ny hafatry ny filohan’ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana,
Filohan`ny Antenimieram-pirenena vaovao Hitarika ireo depiote tsy hanao fomba maloto
Araka ny voafaritry ny lalàna, hivory voalohany ireo solombavambahoaka vao voafidy ny talata faharoa manaraka ny famoahana ny voka-pifidianana ofisialy,
Depiote vaovao « Tokony hitondra rivo-baovao. »
Miarahaba ny vahoakan’Ambohidratrimo aho ary isaorako daholo na ireo nifidy na tsy nifidy ahy, hoy ny depiote vaovao ao Ambohidratrimo, Jhonny Rakotoarisoa.
Tetikasan’ny Filoha Nangina tanteraka ny Tanamasoandro, Miami, Paris..
Efa nalaza tamin’ny seho ivelany hatramin’ny taona 2009 moa ny filoham-pirenena Malagasy, Andry Rajoelina.
Tontolo politika Takon’ny fahombiazan’ny Barea
Takona tanteraka ny raharaha politika eto amin’ny tany sy ny firenena amin’izao fotoana izao.
Aza tia kely !
Izay ihany ilay mahavoa anareo ry Jean a ! Efa hita izao fa ny fanampian-dry Jean Malala-tanana an’ilay kilonganareo no
Mondial vehivavy 2019 Mbola nahery indray ny Stars and Stripes Amerikanina
Norombahin’ny Stars and Stripes Amerikanina ny amboara eran-tanin’ny baolina kitra vehivavy eran-tany 2019 notontosaina tany Frantsa.
Mitohy ny lalantsika !
Mandravarava any Egita ny ekipam-pirenena Malagasy eo amin’ny fiadiana izay ho tompondakan’i Afrika na ny “CAN 2019”. Tapitr’ohatra ny fanoharana azo hanehoana ny hafalian’ny vahoaka Malagasy tsivakivolo.
Fitrandrahana volamena Ny vahiny no manankarem-be ao Vohipeno
Tokony hojerena manokana ny lalàna mahakasika ny harena ankibon’ny tany (codes miniers) mba ho tombony amin’ny vahoaka Malagasy ny fitrandrahana,
Fahantrana Olana mbola saro-bahana eto Madagasikara
Tena mbola mahantra fadiranovana ny Malagasy satria maro be no tsy mandray karama 210 000 Ar isam-bolana izany. Misy ny mandray 2 000 Ar isan’andro (60 000 Ar isam-bolana) na 5 000 Ar isan’andro (150 000 Ar isam-bolana).
Mpivarotra hani-masaka eny an-dalambe Misy polisy kaominaly manara-maso in-droa isan-kerinandro
Tsy misy ny asa, mitombo isan’andro ny mpivarotra amoron-dalana. Ireo mpivarotra hani-masaka no mameno ny faritra rehetra manerana ny renivohitra.
Voka-pikarohan’ny mpianatra Mamokatra herinaratra ihany koa ny vary
Vao ny 35 %-n’ny mponina raha betsaka no misitraka herinaratra eto amintsika.
Olona manana fahasembanana Tsy jeren’ny fitondrana amin’izao loatra
Misedra olana ireo olona manana fahasembanana eto amintsika. Ankoatra ny tsy fampiharan’ny fitondram-panjakana ireo zo tokony hositrahan’izy ireny dia nanambara Radafinintsoa Josoa filohan’ny
Tee Shirt misy soratra BAREA Mahalafo 10 isan’andro ny mpivarotra iray
Zary lasa akanjo nahafinaritra ny malagasy tato anatin’ny tapa-bolana izao ny manao ireo karazana tee-shirt misy ny sary ny soratra Barea an’i Madagasikara.
Fampandrosoana lovain-jafy Mbola ho tratran’i Madagasikara ihany ve ?
Araka ny tatitry ny Banky iraisam-pirenena, mihatsara ny toekarena ankapobeny eto Madagasikara saingy tsy mipaka any amin`ny isam-batan`olona.
Mpiompy trondro ao Moramanga Nomena zana-trondro miisa 1900
Raha tsy dia be mpahalala loatra tao Moramanga teo aloha ny seha-pihariana trondro ao sy ny manodidina azy dia efa mahasarika tantsaha maro izany ankehitriny,
Tsy fandriampahalemana Efa tongan’ny dahalo Ambohimanga
Sahy mitsapa sy mandranitra ny tanjaky ny mpitandro filaminana ireo jiolahy.
Ambatolaona RN2 Nifandona mafy ilay Isuzu sy Sprinter
Fiara roa samihafa samy iray zotra hihazo an’Antananarivo avy any amin’ny faritra Atsinanana no nifandona teo amin’ny lalam-pirenena faharoa, PK 57, teo Ambatolaona Andrefana